Muxuu ka yiri Tababare Jurgen Klopp saxiixa cusub ee Liverpool Xherdan Shaqiri? – Gool FM
Muxuu ka yiri Tababare Jurgen Klopp saxiixa cusub ee Liverpool Xherdan Shaqiri?
(Liverpool) 14 Luulyo 2018. Tababaraha Jarmalka Jurgen Klopp ayaa amaanay awooda laacibkiisa cusub ee Xherdan Shaqiri, kadib markii dhawaan la dhameystiray heshiiska uu kaga mid noqday Reds.
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa dhammaystirtay saxiixa Xherdan Shaqiri kaasoo ay kala soo wareegeen Stoke City, waxaana uu u saxiixay heshiis waqti dheer ah wuxuuna saxiixay heshiis ilaa iyo 2023.
Jurgen Klopp ayaa wareysi uu ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee kooxda Liverpool wuxuu kaga hadlay tayada Xherdan Shaqiri.
“Ma aanan ka fekereynin go’aanka ah in aan la saxiixano Xherdan Shaqiri, sababtoo ah marka aad hesho fursad aad kula saxiixan karto xidig sidiisa oo kale waa inaad dadaal ku bixisaa dhameystirno heshiiska”.
“Shakiri wuxuu leeyahay xawaare, Liverpool waa meesha ku haboon haatan, sababtoo ah wuxuu u baahan yahay dhiiragalin, kooxdana way ka caawin doontaa”.
“Waxaan dooneynaa inuu muujiyo awoodiisa, sababtoo ah wali wuxuu u baahan yahay horumar iyo in uu kooxda ka sameeyo horumar, sidoo kale wuxuu ka ciyaari karaa qeybo kala duwan ee gudaha garoonka, taasna waxay naga caawineysaa in waxyaabo badan aan u adeegsano xidiga aan haatan heli karno adeegooda”.
“Si wanaagsan ayaan u garanayaa inta u ku sugnaa Switzerland iyo Germany, aad ayaan ula dhacsanaa qaab ciyaareedkiisa mudo fog, waxyaabaha uu gaarka ku yahay ayaa ah inuu si wanaagsan u garanayo horyaalka Premier League, sidoo kale si wanaagsan ayuu ugu ciyaaray dalkiisa koobka aduunka”.
Croatia oo ay ka Maqan yihiin Shan Cayaariyahano iyadoo 48 saac ay ka hartay Finalka Koobka Adduunka